BWA022-DEMS03-SET - OMG Digital Evidence Management System ho an'ny BWC090 & BWC089 - Vahaolana OMG
Ny metaly rehetra-vy, mateza sy henjana;
Mifanaraka tanteraka amin'ny USB1.1 sy USB2.0, manohana ny hotswappable, mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny fakantsary tonta amin'ny vatana.
Miaraka amin'ny fiarovana roa amin'ny vokatra, afaka miaro ny fitaovana ampifandraisinao amin'ny fandefasana entana be loatra, ny fanohanan'ny herinaratra be loatra ary ny fiarovana amin'izao fotoana izao; ny seranana tsirairay dia manome hatramin'ny 2.0A ankehitriny.
Ny clip fandraisam-peo fampiharana dia azo raisina amin'ny slot folo, izay milamina tsara.
Fiantsonana docking, motherboard anatiny dia misy mpankafy. Mba hisorohana ny fihenan'ny andro noho ny hafanana be loatra.
Fitaovana switch, izay azo hamonoana herinaratra USB valo.
Tohano Windows 10;
function: Mameno ny fakantsary maro ny fakantsary ary alefaso ny data
Fifandraisana mifandray indrindra: 10
Volonta isaky ny seranan-tsambo: 5V
Faran'izay lehibe indrindra isaky ny seranan-tsambo: 2.0 A, mifanaraka amin'ny fitaovana mifandray.
Herin'ny fampidirana ambony indrindra: 120W
Habe Net: 40cm x 30cm x 10cm
Lanja afa-karatsaka: 8Kg